ဖတ်ရှုပါ! ကို http://www.knwautobody.com ကို http အားသင်၏အသုံးပြုမှုခွင့်ပြုတစ်ဦးကအခြေအနေအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတောငျး://www.knwautobody.com.
ဒီ site ကိုအသုံးပြု OR အသုံးပြု. သင် FULL အာဏာပိုငျမြားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခညျြနှောငျအက်ဥပဒေရှိသည်ကိုယ်စားပြုမှု, မညျသညျ့တတိယပါတီ, ကုမ္ပဏီ, သို့မဟုတ်တရားဝင် ENTITY, နှင့်သင့်အသုံးပြုမှုနှင့် / သို့မဟုတ် Interactive ကွောငျး, အဖြစ်အသုံးပြုသို့မဟုတ် Interactive ဆက်လက်, site ကိုသင့်ဖတ်ရန်မျိုးနှင့်အသုံးပြုမှုဤဝေါဟာရများဖို့သဘောတူငါတို့ကဲ့သို့ site ပေါ်တွင် post အံ့သောငှါအခြားသတင်းများသဘောတူညီမှုများရှိပါသည်နဲ့အတူ.
ကြည့်ရှုခြင်း BY, လာရောက်လည်ပတ်, အသုံးပြုခြင်း, OR ကို http အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း://www.knwautobody.com သို့မဟုတ်မည်သည့် Banner နဲ့, ပေါ်လာသည်, အိုင်တီပေါ်တဲ့ကြော်ငြာ, သင်အသုံးပြုမူဝါဒနှင့်ကို http တွေရဲ့ privacy မူဝါဒ၏ဤဝေါဟာရများအားလုံးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသဘောတူညီထား://www.knwautobody.com.
ကို http://www.knwautobody.com အထူးကလေးများ'S အွန်လိုင်း Privacy Protection Act ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမဆိုတစ်ဦးချင်းစီ ACCESS ငြင်းဆိုလိုက်သည် (CUP အ) OF 1998.
ကို http://www.knwautobody.com ဆိုမသိမ်းအပ်အကြောင်းပြချက်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး OR Viewer လက်လှမ်းငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်. နောက်ပြီး Privacy မူဝါဒ၏စည်းကမ်းချက်များကိုအောက်တွင်, သင်အမြင်များကိုတစ်ဦး Conditions အဖြစ်လက်ခံ, ကို http://www.knwautobody.com သီးသန့်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အခြားသောအသုံးပြုမှုများအတွက် Data များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခွင့်ပြု.
အသုံးပြုမှုသဘောတူညီချက်၏ဤသတ်မှတ်ချက်အချိန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်. ဧည့်သည်များကတိသစ္စာပြုတာဝန်ဖူး, ကို http ဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်://www.knwautobody.com, အသုံးပြုမှုစာမျက်နှာ၏ဤဝေါဟာရကိုသူတို့ကို http လည်ကြည့်အကြိမ်တိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ထိုသို့သောပြောင်းလဲမှု၏ information သူတို့ကိုယ်သူတို့စောင့်ရှောက်ဖို့://www.knwautobody.com.
ဧည့်သည်များ, ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေ, အသုံးပြုသူများသည်, လစဉ်ကြေး ပေး., အဖွဲ့ဝင်တွေ, တွဲဖက်, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ, စုပေါင်းအဖြစ်ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်း “ဧည့်သည်များ,” ဒီအသဘောတူညီချက်မှပါတီများကဖြစ်ကြောင်း. အဆိုပါ website နှင့်ယင်း၏ပိုင်ရှင်များနှင့် / သို့မဟုတ်အော်ပရေတာကဒီသဘောတူညီချက်မှပါတီများကဖြစ်ကြောင်း, ဤနေရာတွင်အဖြစ်ရည်ညွှန်း “website က။”
သင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်ဤ website ကိုအတူတစ် express ကိုစာဖြင့်ရေးသားကန်ထရိုက်ထဲသို့ဝင်လေပြီမဟုတ်လျှင်, ဧည့်သည်များ, ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေ, လစဉ်ကြေး ပေး., အဖွဲ့ဝင်တွေ, တွဲဖက်, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူ setting ကိုအတွက်ဤအချက်အလက်များကိုသုံးမှမပိုင်ခွင့်ရှိသည်; သူတို့ကထုတ်လွှင့်ရန်မပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ဒါကြောင့်ကော်ပီကူး, ကယ်, ဒါကြောင့် print ထုတ်, ရောင်း, သို့မဟုတ်ဤ website ၏ content တွေကိုမဆိုဝေမျှထုတ်ဝေ. ဤ website ၏အကြောင်းအရာတွေကိုအားသွားရောက်ခြင်းဖြင့်, သငျသညျ access ကိုဤအခွအေနအေရန်သဘောတူနှင့်သင်မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုမှုသည်တရားမဝင်ဟုနှင့်လူထုအခြေပြုသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်သားပြစ်ဒဏ်များရန်သင့်အားလက်အောက်ခံစေခြင်းငှါဝန်ခံကြ. နောက်တဖန်အ, ဧည့်သည်များ၏ content ကိုအသုံးပြုရန်သမျှသောစကားတို့ကိုအဘယ်သူမျှမအခွင့်အရေးကိုရှိပါတယ်, သိ. သို့မဟုတ်ဝေမျှ, ယင်း၏ databases များကိုအပါအဝင်, မမြင်ရတဲ့စာမျက်နှာများတွင်, နှင့်ဆက်စပ်စာမျက်နှာများကို, ၏ underlying code ကို, ဆိုက်ဆံ့စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်အခြားမူပိုင်, မည်သည့်အကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်သမျှသောစကားတို့ကိုဆိုအသုံးပြုရန်. ဒါကြောင့်ဒီအပြဋ္ဌာန်းချက်၏ချိုးဖောက်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာအတိအကျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်းအချက်ကို၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်, ဧည့်သည်ကို http ၏ပိုင်ရှင်များလျော်ကြေးပေးဖို့သဘောတူ://www.knwautobody.com အမေရိကန်ငွေပမာဏအတွက်အရည်အပျက်အစီးများနှင့်အတူ. $100,000, သို့မဟုတ်, ဒါကြောင့်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်လျှင်, ဒီအပြဋ္ဌာန်းချက်ချိုးဖောက်များအတွက်အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, သာ. ကြီးမြတ်၏ကိုမဆို. သူသို့မဟုတ်သူမသည်ဤပြဋ္ဌာန်းချက်လက်ခံခြင်းကို http ဝင်ရောက်ခြင်းတစ်ခွအေနအေကွောငျးကိုနားလည် visitor ရမ်း://www.knwautobody.com နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကို http ကြောင်း://www.knwautobody.com လက်ခံမှုဖွဲ့စည်း.
ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းလူ့အခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်မှု, ရောင်းချမည်, ဒီနည်းကို website ၏မာတိကာ Publish
အဆိုပါ website နှင့်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပိုင်ရှင်ကကပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရနေကြတယ်. Website တွင်ပါရှိသောပစ္စည်းကိုစီးပွားဖြစ်ဖြစ်ယူဆနှင့်မူပိုင်ရမည်ဖြစ်သည်. ဧည့်သည်များဆိုက် content တွေကိုအတွက်သမျှသောစကားတို့ကိုအဘယ်သူမျှမအခွင့်အရေးရှိသည်. ဒါကြောင့်အမြန်ကန်ထရိုက်ဒါမှမဟုတ် website ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပြုမဟုတ်လျှင်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက် website က content တွေအသုံးပြုမှုသည်တရားမဝင်ဟု.
site ကိုမှ hyperlinks, CO-brand, “frame” AND REFERENCING ကို SITE တားမြစ်ချက်
ဖော်ပြက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရလျှင်, အဘယ်သူမျှမကဤ site ကို hyperlinks နိုင်ပါသည်, သိ. သို့မဟုတ်ဝေမျှ, (အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, logotypes, အမှတ်တံဆိပ်, တံဆိပ်သို့မဟုတ်မူပိုင်ပစ္စည်းကို) သူတို့မှမဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ထို့အပွငျ, သင် URL ကိုရည်ညွန်းရန်ခွင့်ပြုထားကြသည်မဟုတ် (website က address ကို) ဤ website သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့ထံမှ express ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သည့်ကုန်သွယ်ခွန်သို့မဟုတ် Non-စီးပွားဖြစ်မီဒီယာကဒီ website မှာမဆို page ၏, မ frame ကို 'ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်’ ဆိုက်. သငျသညျအထူးသဖြင့်ဆိုထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ် de-ကိုသက်ဝင်စေဖို့ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရန်သဘောတူ, နှင့်ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုချိုးဖောက်နေဖြစ်ပေါ်လာအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ဖြစ်. ဒါကြောင့်ဒီအပြဋ္ဌာန်းချက်၏ချိုးဖောက်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာအတိအကျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်းအချက်ကို၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်, သငျသညျကို http ၏ပိုင်ရှင်များလျော်ကြေးပေးရန်သဘောတူ://www.knwautobody.com အမေရိကန်ငွေပမာဏအတွက်အရည်အပျက်အစီးများနှင့်အတူ. $100,000, သို့မဟုတ်, ဒါကြောင့်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်လျှင်, ဒီအပြဋ္ဌာန်းချက်ချိုးဖောက်များအတွက်အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, သာ. ကြီးမြတ်၏ကိုမဆို. သငျသညျသင်သည်ဤပြဋ္ဌာန်းချက်လက်ခံခြင်းကို http ဝင်ရောက်ခြင်းတစ်ခွအေနအေကွောငျးကိုနားလည်ကြောင်းခိုင်လုံ://www.knwautobody.com နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကို http ကြောင်း://www.knwautobody.com လက်ခံမှုဖွဲ့စည်း.
site ၏ content များအတွက်သတိပြုစရာများ
ကို http://www.knwautobody.com မှာပေါ်ထွန်း content ကို၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမသက်ဆိုင်ကြောင်း disclaims, ပေါ်နှင့်ဆက်စပ်, သို့မဟုတ်ကို http အပေါ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့://www.knwautobody.com. ဧည့်သည်များကြည့်ရှုရန်နှင့်သက်ဆိုင်သောအားလုံးစွန့်စားမှုယူဆ, စာဖတ်ခြင်း, သုံးပြီး, သို့မဟုတ်ဤအချက်အလက်အပေါ်သို့မှီခို. သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထိုဆန့်ကျင်ရန် express ကိုကန်ထရိုက်မဟုတ်ရင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြမဟုတ်လျှင်, သငျသညျတိကျမှန်ကန်အဖြစ်ဤနေရာတွင်ပါရှိသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်အပေါ်မှီခိုရန်မပိုင်ခွင့်ရှိသည်. ငါတို့သည်နောက်ထိုကဲ့သို့သောအာမခံလုပ်.
အန္တရာယ်ရှိသော FOR သတိပြုစရာများဒီနည်းကိုဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ယင်း၏မာတိကာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် software စေ၏. ဧည့်သည်များဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးအန္တရာယ်ယူဆတယ်, worm, OR အခြားသတင်းများအကျင့်ပျက်ခြစားမှုစတဲ့အချက်တွေ.
ကျွန်တော်တို့ဟာကွန်ပျူတာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒါမှမဟုတ်ဧည့်သည်ကိုဧည့်သည်နောက်ပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်အမှတ်မထင်ဧည့်သည်ရဲ့ကွန်ပျူတာကူးမြောက်ကြောင်းမကောင်းတဲ့ code ကိုသို့မဟုတ်အချက်အလက်ထံမှအတူဆက်သွယ်မဆိုလူတစ်ဦး၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုတာဝန်မျှမယူဆ. နောက်တဖန်အ, ဒီ site နှင့်အတူဧည့်သည်အမြင်များနှင့် Interactive, သို့မဟုတ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေသို့မဟုတ်တဲ့ pop-ups သို့မဟုတ်ကြော်ငြာခြင်းပလ္လင်ပြသ, သူ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုမှာ.
Downloads ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် FOR သတိပြုစရာများ
ဒီအကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုကနေဒီ site ကနေဧည့်သည် downloads, သတင်းအချက်အလက်. website က downloads, မကောင်းတဲ့ကိုကွန်ပျူတာ codes တွေကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမအာမခံစေသည်, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, virus နဲ့ worms.
ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်, သုံးပြီး, ဒါမှမဟုတ်ဒီဆိုက်နှင့်မည်သည့်ထုံးစံ၌အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေအပါအဝင်, ကြော်ငြာခြင်း, သို့မဟုတ်တဲ့ pop-ups, downloads,, နှင့် website ကိုတစ်ဦးအခွအေနေသကဲ့သို့မိမိသိမ်းအပ်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုပါရန်, ဧည့်သည်အစဉ်အမြဲမဆိုဖြစ်နိုင်သောထိခိုက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ဆိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အချက်ပေါ် အခြေခံ. လက်ျာဘက်ဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွဖော်ပြချက်၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏တောင်းဆိုမှုများဖို့အားလုံးကို waives, အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲခံထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းရှိမရှိ, ကာလတွင်သို့မဟုတ် unforeseeable, သဘာဝတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ရှိမရှိ. ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးတာဝန်ယူမှုကိုသင်ပေးဆောင်ပမာဏကိုကျော်လွန်မည်မဟုတ်, ဤအထူးသီးသန့်အဘို့ခွင့်ပြုပါစေခြင်းငှါမဆိုတရားစီရင်မှုများအတွက်, ရှိလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်.
ထို့အပြင်, သင်သည်ငါတို့ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်ကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုက်ကိုကိုင်ထားမှမသင်သဘောတူ, ရန်ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ, ဘုရားသခငျ၏လုပ်ရပ်များ, စစ်တိုက်ခြင်း, အကြမ်းဖက်ဝါဒ, ပုန်ကန်, အဓိကရုဏ်း, ရာဇဝတ်မှု, သဘာဝဘေးဒဏ်, ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်၏, လုပ်အားပြတ်လပ်မှုသို့မဟုတ်ပြတ်တောက် (ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောသပိတ်အပါအဝင်), ပစ္စည်းများရှားပါးမှု, ကျနော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းမဟုတ်ဟူသောနှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များ.
ဧည့်သည်၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ရပ်အတွက်သူကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တတိယပါတီဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသဘောတူသို့မဟုတ်ကို http များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော://www.knwautobody.com, ဧည့်သည်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုက်ပေးလျော်ခြင်းများလိမ့်မည်, နှင့်, သက်ဆိုင်လျှင်, ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများ.
visitor ကြည့်ရှုနေတဲ့အခွအေနေအဖြစ်သဘောတူ, ဧည့်သည်နှင့်ဝဘ်ဆိုဒ်အကြားမည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ဦးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ယူဆကြောင်း. အားလုံးသည်တင်ပြ, သိ. ဝေမျှအပါအဝင်, ဂရပ်ဖစ်ပလ္လင်တွင်ပါရှိသော, တင်ပြချက်များ၏ content ဒါမှမဟုတ်ဆို, ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သီးသန့်အိမ်ခြံမြေဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အသုံးပြုသောစေခြင်းငှါ,, နောက်ထပ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ, မည်သည့်အပိုဆောင်းမျိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်. ဧည့်သည်ကိုသာဝဘ်ဆိုဒ်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သဘောတူ, သောကအစဉ်အမြဲမထိုက်မတန်ကိုမြင်သည်အတိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်တစုံတအတွက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း. “တင်ပြ” ဒါ့အပြင်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ပါသည်.
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာမျိုးမျှမပိုဆောင်းအသိပေးစာဖော်ပြဧည့်သည်များနှင့်ဧည့်သည်အားပေးပြီးမှခံရဖို့လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုမိဖို့, လက်ျာ website ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်အတူသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုအခွအေနေအဖြစ်သက်ညှာကြောင်းနာ​​းလည်မှုအချက်ကိုခိုင်လုံမှု.
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ရှုဘို့လိုအပ်တယ်သောထည့်သွင်းစဉ်းစား၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်, သုံးပြီးသို့မဟုတ်ဤ website ကိုအတူအပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့, ဧည့်သည်မဆိုပြောဆိုချက်ကိုဘို့စည်းနှောင်ခုံသမာဓိသုံးစွဲဖို့သဘောတူ, အငြင်းပွားမှုကို, သို့မဟုတ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ (“တောင်းဆိုမှု”) ဆိုမျိုး (ကန်ထရိုက်အတွက်ရှိမရှိ, tort သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်) များထဲကပေါ်ထွက်လာသောသို့မဟုတ်ဤဝယ်ယူမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော, ဒီထုတ်ကုန်, တောင်းနိုင်အောင်ကိစ္စရပ်များကိုအပါအဝင်, privacy ကိုကိစ္စရပ်များကို, နှင့်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ.
အနုညာတစီရင်အငြင်းပွားမှုဟာအမေရိကန်အနုညာတစီရင် Association ကတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ရက်စွဲအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနေသောအမေရိကန်အနုညာတစီရင်အသင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရမည်. အမေရိကန်တွေရဲ့အနုညာတစီရင်ရေးအသင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေး, ယင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, နှင့်၎င်း၏ပုံစံများကိုအမေရိကန်အနုညာတစီရင်ရေးအသင်းထံမှရရှိနိုင်ပါသည်, 335 Madison ကရိပ်သာ, ကြမ်းပြင် 10, နယူးယောက်, နယူးယောက်, 10017-4605. ကြားနာမှုကို http ၏ပိုင်ရှင်၏မြို့သို့မဟုတ်ခရိုင်နေရာယူကြလိမ့်မည်://www.knwautobody.com.
အဘယ်သူမျှမကိစ္စများတွင်ကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်, ဧည့်သည်, အဖှဲ့ဝငျ, ဝယ်ယူသုံးစွဲသို့မဟုတ်ဖောက်သည်တရားရုံးသွားပါသို့မဟုတ်တစ်ဂျူရီရုံးတင်စစ်ဆေးရှိသည်ဖို့ခွင့်ရှိသည်. Viewer ကို, ဧည့်သည်, အဖှဲ့ဝငျ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပေးအဖြစ် မှလွဲ. သုံးစွဲသူသို့မဟုတ်ဖောက်သည် Pre-ရုံးတင်စစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ရှိသည်မည်မဟုတ်; သငျသညျခုံသမာဓိမှမည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုဘာသာရပ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေကိုမဆိုအတန်းအစား၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်; အဆိုပါခုံသမာဓိရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗိုလ်လုပွဲဖြစ်နှင့်အယူခံဝင်များ၏ကန့်သတ်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်အတူ binding လိမ့်မည်.
အဆိုပါရေပန်းစားပါတီအငြင်းပွားမှုကိုခုံသမာဓိနှင့်ဆက်စပ်ဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွကုန်ကျစရိတ်ကအခြားပါတီများက reimbursed ခံရကြလိမ့်မည်, ရှေ့နေအခကြေးငွေများအပါအဝင်, စုဆောင်းမှုအခကြေးငွေ, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအခကြေးငွေ, ခရီးသွားလာစရိတ်.
ဒီအဝယ်ယူမှုကိုရည်မှတ်ဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုဥပဒေကတစ်ဦးဝင်းရှေ့မှာဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်ဟုဆိုပါက, အကြို- သို့မဟုတ် Post-ခုံသမာဓိ, Viewer ကို, ဧည့်သည်, အဖှဲ့ဝငျ, ဝယ်ယူသုံးစွဲသို့မဟုတ်ဖောက်သည်မဟုတ်ရင်ကဒီမှာသတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်လျှင်ကို web ပိုင်ရှင်ကို၏အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကြေငြာပြည်နယ်နှင့်မြို့တော်ကိုဖြစ်သောတစ်ဦးတည်းသောနှင့်သင့်လျော်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှသဘောတူ. ဆိုင်းနေတဲ့ဖက်ဒရယ်တရားရုံးကသောဖြစ်ရပ်အတွက်, သင့်လျော်သောတရားရုံးကို http ၏ပိုင်ရှင်မှအနီးဆုံးဖက်ဒရယ်တရားရုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်://www.knwautobody.com ရဲ့လိပ်စာ.
Viewer ကို, ဧည့်သည်, အဖှဲ့ဝငျ, ဝယ်ယူသုံးစွဲသို့မဟုတ်ဖောက်သည်သက်ဆိုင်သောဥပဒေကရကြလိမ့်မည်လျှောက်ထားရန်သဘောတူ, အားလုံးကိစ္စများတွင်, ကို http ၏ပိုင်ရှင်၏ပြည်နယ်၏ဖြစ်://www.knwautobody.com.
33 ပယ်ရီ Street,